Soo dejisan RAR 5.30.34 – Android – Vessoft
Soo dejisan RAR
Rar – software awood leh iyo MFT in ay la shaqeeyaan kaydka. Rar u saamaxaaya in ay abuuraan ama ka soo fagid tiro badan oo ah qaabab caadiga ah iyo ku siinayaan shaqada la archives nooca ZIPX. Software waxay bixisaa wax-qabadka riixo ugu badnaan, oo waxaa lagu gaarayaa iyada oo la isticmaalo dhowr Tuulo processor. Rar u saamaxaaya in ay sir magacyada file ah, si ay u ilaaliyaan archives la password ka gees ah ka soo fagid iyo reserved fursado kale oo lagu jiro riixo ee files. Sidoo kale software ka kooban yahay qalab inuu ka soo kabsado buugagga taariikhda oo burburay oo lagu eego faylalka soo baakadeeyey ee daacadnimada. Rar ayaa si fudud ah si ay u isticmaalaan interface oo kala duwan, qarbeddaduna waa in la beddelo asalka.
Taageerada ugu badan ee qaabab archive
Recovery ee archives dhaawacan
Waxay abuurtaa archives lo
Daawashada oo ka mid ah waxyaabaha ku jira faylasha Tifaftirayaasha
Comments on RAR:
RAR Software la xiriira:
Files riixo Software ayaa si aad u eegto, la abuuro oo ka soo fagid buugagga taariikhda noocyada kala duwan. Sidoo kale software la codsiyada dhinac saddexaad ka shaqeeya in la furo files kala duwan iyo dukumentiyo.
العربية, English, Українська, Français... PPSSPP 1.1.1
العربية, English, Українська, Français... Mamba 3.14
Files qalab haboon qaybsiga file degdeg via Wi-Fi. software The taageertaa kala iibsiga xogta in computer ama qalab badan oo isku mar ah.
Files Gurmad Codsiga MFT. Software ayaa u saamaxaaya in ay soo saarto ama soo celin xogta of noocyo kala duwan iyo guuray files si ay kaadhka xusuusta.
English, Français, Español, Deutsch... Instagram 6.11.2
العربية, English, Français, Español... Truecaller 6.01
العربية, English, Українська, Français... Guns 1.99
Games Aadan Qabille in uu soo bandhigo hub iyo macluumaad kala duwan oo ku saabsan. Software waxay kuu ogolaanaysaa inaad in ay toogtaan diirada u kala duwan ah iyo xaqiijin sifooyinka hubka.
العربية, English, Українська, Français... Polaris Office 7.3
العربية, English, Українська, Français... Advanced Download Manager 5.1.1
Downloaders Tababaraha waxa uu ku haboon inaad kala soo baxdo xogta noocyada kala duwan. Software wuxuu isticmaalaa ugu algorithms gaar ah dajinta file dhakhso.